के तपाईलाई थाहा छ ? कसरी घट्नेछ जिरा सेवन गर्दा मोटोपना – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/के तपाईलाई थाहा छ ? कसरी घट्नेछ जिरा सेवन गर्दा मोटोपना
काठमाडौँ- जिरा स्वादका निमित्त प्रयोग नभई स्वास्थ्यका निम्ति पनि उतिकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । तर हामिले तरकाली पकाउँदा जिरालाई स्वादका निमित्त प्रयोग गर्छौ । यसले मसलाको रुपमा काम गर्छै । र तरकारीलाई स्वादिलो बनाउन पनि मद्धत गरेको हुन्छ । आयुर्वेदमा औषधि बनाउनको लागि पनि यसकोप्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
जिराले हाम्रो पेटसम्बन्धि भएका समस्याहरुलाई निको पार्ने काम पनि यसले गर्छ । मोटा मानिसहरुको लागि पनि यसको निकै महत्व रहेको हुन्छ । शरिरको तौललाई नियन्त्रण गर्नुको साथै तौल घटाउन पनि निकै मद्धत गर्छ । यसलाई कसरि सेवन गर्न त रु भन्दा एउटा ठूलो चम्चा जिरालाई एक गिलास पानीमा भिजाएर एक रातभर राखी बिहान उमालेर चिया जस्तै तातो बनाएर पिउने र जिराका दानालाई पनि चपाउनाले निकै फाइदा गर्छ ।
यो प्रक्रियालाई दैनिक रुपमा प्रयोग गर्नाले शरीरको कुनै पनि ठाउँमा अनावश्यक रुपमा जम्मा भएको बोसोलाई कम गर्छ । भुटेको हिंग, बिरेनुन र जिरा बराबर मात्रामा मिलाएर धूलो बनाई यसलाई १र३ ग्रामका दरले दैनिक दुई पटक खानाले पनि मोटोपन घटाउन सहयोग गर्छ । त्यसर्थ ३। जिराको सेवनले शरीरको अनावश्यक मोटोपनलाई मात्र घटाउँदैन, यसले शरीरमा रक्तसञ्चारलाई पनि नियमित बनाउँछ । साथै कोलेस्ट्रोल घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । साथै यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।
कपाल झर्नबाट लगातार तिन महिना सम्म यो उपाय अपनाउनुहोस्, रोकिनेछ !